प्रकाश दाहालको ज्यान लिने हृदयघात के हो ? किन हुन्छ र कसरी बच्‍ने ? - Samata Khabar
४ मंसिर २०७४, सोमबार ०५:२२
पछिल्लो पटक युवाहरु हर्ट अट्याक (हृदयघात) का शिकार हुन थालेका छन् । काठमाडौंको शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा हृदयाघात (हर्ट अट्याक)का बिरामी बढ्न थालेका छन् ।
आइतबार विहानमात्रै प्रकाश दाहालको निधन भएको छ । प्रकाश त प्रचण्डका छोरा भएकाले सबैले जानकारी पाए र समवेदन दिन पाए तर दिनहु जसो युवा पुस्ता यही हर्ट अट्याकको शिकार भइरहेका छन् ।
के हो त हर्ट अट्याक ? यो कसरी हुन्छ र कसरी बच्नेबारे जान्नुपर्छ
‘विकसित देशको सुविधाजनक जीवनशैली र खानपानको नक्कल गर्दा अस्वस्थकर खानपिन र बढी सुविधाभोगी बन्ने होडबाजीले हृदयरोगीको संख्या बढाइरहेको छ’, डा. कोइरालाले भने, ‘झन् युवापुस्तामा धूमपानको लतले त कलिलै उमेरमा रोगी बनाउन थालिसकेको छ ।’
हृदयाघात भएका व्यक्तिले समयमै उपचार नपाए रोगीको तत्काल मृत्यु हुन सक्छ। हृदयाघात हुने लगभग एकतिहाइ मान्छेको अस्पताल नै पुग्न नपाई मृत्यु हुन्छ। हृदयाघातपछि अस्पताल पुग्ने ९० प्रतिशत बिरामी सामान्यतया बाँच्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।